मृत्युदण्डले रोक्ला त बलात्कार ? | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण मृत्युदण्डले रोक्ला त बलात्कार ?
on: ५ भाद्र २०७५, मंगलवार ०६:२७ लेख | दृष्टिकोण
मृत्युदण्डले रोक्ला त बलात्कार ?
गत शनिवार माइतघर मण्डलामा बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्ने मागसहित महिला तथा युवतिहरूले पेटिकोट लगाएर सरकारको विरोध गरे । यसले निकै आलोचना र बहस सृजना गर्‍यो । केही हप्ताअघि मात्रै भारतमा पनि बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय दिने कानून ल्याइयो । साउदी अरेबिया, चीन, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, इजिप्ट, इरान, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया र बङ्गलादेशमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइन्छ । अमेरिकाको फ्लोरिडा र लुइसियानालगायत केही राज्यमा पनि यस्तो व्यवस्था छ । अमेरिकामा बलात्कारीलाई अधिकतम सजाय आजीवन कारावास नै हो । इरान, स्कटल्याण्डमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । यूरोपका केही देशमा न्यूनतम ४ वर्षदेखि अधिकतम ३० वर्षसम्मको जेलसजाय दिने व्यवस्था छ ।
मृत्युदण्डले बलात्कार रोक्छ कि रोक्दैन भन्ने विषयमा भएकाले अध्ययनहरूले परस्परविरोधी निष्कर्ष निकालेका छन् । केहीले मृत्युदण्डले बलात्कार रोक्ने देखाएका छन्, केहीले खासै असर नपारेको देखाएका छन् ।
पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानमा बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय छ । त्यसैले भारतीयहरूले पनि यस्तै कानूनको माग राखेका हुन सक्छन् । पाकिस्तानमा हरेक २ घण्टामा १ महिलाको बलात्कार हुने गरेको छ । अफगानिस्तानमा पनि बलात्कार उच्च छ । बङ्गलादेशमा गतवर्ष ८ सय १८ बलात्कारका घटना भएका थिए । यसमध्ये ४७ जनाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो ।
अमेरिकामा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था नभएका र भएका राज्यबीच बलात्कारको दरमा खासै भिन्नता छैन । तर, मृत्युदण्डको व्यवस्था भएका राज्यमा बलात्कारपछि पीडितलाई मारिदिने प्रवृत्ति धेरै छ । भोलि आफू फसिन्छ भनेर प्रत्यक्ष प्रमाण मेटाउन पनि पीडकले बलात्कारपछि पीडितलाई मारिदिन्छन् । हाम्रो देशमा पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था भए यस्तै नहोला भन्न सकिन्न ।
न्यायसम्पादनमा झन् ढिलाइ
बलात्कृत जीवित नै भएको खण्डमा पीडित कमसे कम अहिलेसम्म ज्यूँदो त छ भन्ने भावनाले पनि दोषीलाई फाँसी दिने प्रक्रियामा आलटाल हुन्छ । अति गम्भीर नै भए मात्रै नत्र न्यायप्रणालीले पनि प्रमाण नपुगेको भन्दै सकेसम्म त्यस्ता फैसला टार्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । भारतमै पनि सन् २०१२ को डिसेम्बरमा भएको मेडिकल छात्रा बलात्कारको घटनामा दोषीलाई ‘फाष्ट ट्र्याक’ ट्रायलमार्पmत अदालतले फाँसीको सजाय दिएको थियो । तर, त्यसयता वर्षेनि उजुर भइरहेका बलात्कारका घटनामा २० प्रतिशतभन्दा कमको मात्रै फैसला भएका छन् ।
अहिलेसम्मको अनुभवले पनि मृत्युदण्डजस्तो सजाय व्यवस्थाले पीडितले समयमै न्याय नपाउने र उनीहरूमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने देखाएको छ । पीडक आफन्त वा चिनेजानेको व्यक्ति नै भएको स्थितिमा समस्या अझ बढी हुन्छ । अधिकतम सजाय नै मृत्युदण्ड भएपछि थप गम्भीर स्थितिमा के सजाय दिने त भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ ।
मानिसलाई समाज, सामाजिक मूल्य मान्यतालगायत कुराले मात्रै सामाजिक बनाएको हो । ऊभित्र एउटा हिंस्रक जनावर पनि छ । प्रायः त्यो जनावर सुषुप्त हुन्छ । कति बेला त्यो जागेर अरूलाई आक्रमण गर्छ थाहा हुँदैन । १०÷१२ वर्षको केटादेखि ९० वर्षका वृद्धसम्म बलात्कारी छन् । समस्याको जड नै दिमागमा छ । मृत्युदण्डबाट यसको समाधान सम्भव छैन ।
स्पेन, अमेरिकालगायत देशमा बलात्कारीलाई जेलभित्रै विशेषखालको ‘साइकियाट्रिक’ उपचार दिने व्यवस्था छ । अनुसन्धानहरूले यस्तो उपचार प्रभावकारी हुने पनि देखाएका छन् । दोषी ठह¥याइएकालाई मात्रै होइन, यस्तो उपचार सामान्य मानिसलाई पनि दिने प्रचलन अपनाउन सकिन्छ । सामान्य मानिसको ‘स्क्रिनिङ’ गरेर तीमध्ये नकारात्मकता उन्मुख मानसिकता भएका व्यक्ति छुट्याउन र तिनीहरूलाई लक्षित गरेर (तिनीहरू वा सर्वसाधारणले शङ्का गर्न नसक्ने गरी) उपचार गर्ने विधिहरूको विकास गर्न सकिन्छ । यस्ता प्रयास धेरै विकसित देशमा भइरहेका छन् र तिनको परिणाम आशालाग्दो छ ।
बलात्कृत हुनुको पीडा त छँदै छ । त्यसमाथि समाजको लाञ्छना र अन्य सङ्घर्षहरू अझै भयावह हुन्छ । त्यसैले पीडितलाई पीडा शमन गर्न परामर्शको व्यवस्था हुनुपर्छ । पश्चिमा देशहरूमा सरकारले नै बलात्कृतहरूका लागि पुनर्वास केन्द्र र साइकियाट्रिक सर्पोट केन्द्रहरू स्थापना गरेका छन् । तर, हामीकहाँ यस्तो व्यवस्था पर्याप्त छैन । केही गैरसरकारी तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले यस्तो व्यवस्था गरेका होलान् । यिनीहरूको भर गरेर मात्रै हुँदैन । बलात्कृत महिला तथा बालबालिकाको मद्दतका लागि सरकारी तहबाटै छुट्टै केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
पुरूष वा नाबालिग केटामाथिको बलात्कार र यौन हिंसालाई सम्बोधन गर्ने कानूनको पनि उत्तिक खाँचो छ । पछिल्ला केही वर्षयता हामीकहाँ बालकमाथि यौनशोषण गरेको आरोपमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या पनि बढेको छ । त्यसैले अहिले छोरीहरू मात्रै होइन, छोराहरू पनि असुरक्षित छन् । यस पक्षबारे पनि सोच्नु जरुरी छ । सञ्चारमाध्यममा बलात्कार र यौनहिंसाका घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि अरूलाई फसाउने नियतले भूmटा उजुरीहरू पनि बढेका छन् । यस्ता समस्या कम गर्न पनि उपयुक्त व्यवस्था चाहिएको छ ।
बलात्कारीलाई फाँसी दिँदैमा पीडितले न्याय पाउँछ भन्ने छैन । यसले बलात्कार रोक्नभन्दा पनि भइसकेपछिको अवस्थालाई मात्रै सम्बोधन गर्छ । यसको मतलब सजाय नै चाहिँदैन भन्नेचाँहि होइन । अहिलेसम्म विश्वमा भएका अधिकांश अनुसन्धानले पनि बलात्कारविरुद्धको हाम्रो धार गलत छ भन्ने नै देखाइरहेका छन् । पहिलो त हाम्रो आपराधिक न्यायप्रणालीमा नै सुधारको खाँचो छ । सरकार बलात्कारीलाई कस्तो सजाय दिनेभन्दा पनि त्यस्त घटनालाई कसरी रोक्ने भन्नेबारे बढी केन्द्रित हुनु जरुरी छ । हामी अधिकांश समय बलात्कारीलाई दण्ड दिनेतर्फ मात्रै लागिरहेका छौं । पीडितको पीडालाई बेवास्ता गर्छौं । त्यसैले कुनै एक जना पीडितलाई मात्रै न्याय दिलाउनभन्दा पनि भविष्यमा यस्ता अपराध हुन नदिन र समग्र पीडितलाई सकेसम्म छिटो न्याय दिलाउनेबारे सोच्नु जरुरी छ ।